एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफामा ६३% वृद्धि | गृहपृष्ठ
Home लगानी एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफामा ६३% वृद्धि
on: May 13, 2019 लगानी
एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफामा ६३% वृद्धि
वैशाख ३०, काठमाडौं (अस) । चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाफा ६३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सो अवधिमा कम्पनीले रू. ५ करोड ४४ लाख नाफा कमाएको हो । गत आवको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ३ करोड ३२ लाख नाफा कमाएको थियो । चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रू. २२ करोड ६८ लाख आम्दानी गर्न सफल भएकाले नाफा बढेको हो ।
कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब २५ करोड छ । पूँजी वृद्धिका लागि कम्पनीले ६० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गरिसकेको छ । ६० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन बाँडफाँट पश्चात पूँजी रू. २ अर्ब पूग्नेछ । बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब पुर्‍याउन निर्देशन दिएसँगै कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गरेको हो ।
तेस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले रिजर्भ कोषमा रू. २८ करोड ३४ लाख छुट्याएको छ भने बीमा कोषमा रू. १५ अर्ब ७८ करोड जम्मा भएको छ । सो अवधिमा कम्पनीले २ अर्ब ६४ करोड बीमा शुल्क आर्जन गरेको हो । प्रतिशेयर आम्दानी रू. ५ दशमलव ७७, मूल्य आम्दानी अनुपात ७० दशमलव ८५ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय २२ दशमलव ५६ पुगेको छ ।